Bixinta Lacagta - Diiwaanka eGay
Waa maxay qallayl?
Stripe waa mid ka mid ah shirkadaha hormoodka ah oo u ogolaanaya ganacsatada in ay siiyaan bixinnada lacag-bixinta kaarka deynta oo dhan.
Stripe waxay bixisaa amar gaar ah oo ah lacagaha:
Abuuritaanka qalab iibsi si loo abuuro macaamilka Stripe: xogtaada xasaasiga ah marnaba ma dhex marin serveradayada oo xaqiijinaysa ammaanka guud
Xuruufta iyo isdhexgalka: Sharciyada SSL
3D Hubinta Xaqiijinta
Badbaadinta isku-dayga jebinta: RADAR qalabka lidka ku ah khiyaanada
Shahaadooyinka SSL ee Equestrihome iyo PayPal waxay kuu oggolaanayaan in aad qorto xogtaada marka loo wareejiyo. Cinwaanka cinwaanka ah ee uu ku qoran yahay "https" ama calaamadda horey u soo dhigtay waa dammaanad ah inaad bogga ka raadiso nidaamka SSL. Waxay u ogolaanaysaa aqoonsiga is-weydaarsiga iyo xog-gelinta macluumaadka la isku gudbiyo si loo hubiyo in macluumaadkaaga aan la joojin karin khayaanada.